Interspire Inspiring Sophisticated Email Marketing | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 26, i-2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lokhu okuthunyelwe okuxhasiwe. Abantu base-Interspire bakhulisa ibha kusoftware yoMhlinzeki Wensizakalo ye-imeyili ngokuthuthuka kwabo okusha, Umaka we-imeyili we-Interspire.
Interspire inikeza isisombululo sokumaketha esinamandla futhi esinamandla esiza njenge- ezingabizi inguqulo efakiwe noma njenge ibanjwe ngokususelwa kuwebhu Isixazululo. Esinye sezici ezihluke kakhulu enguqulweni yabo yakamuva (5.5) ukuhlolwa kwabo kokuhlukaniswa kwe-A / B kwakamuva.
Umnikelo ojwayelekile we-A / B udinga:
Isampuli engahleliwe ethathwe kuhlu lwakho lwababhalisile
Hlukanisa isampula engahleliwe ngamaqembu wokuhlola nge-imeyili ngayinye
Umkhankaso we-imeyili uthunyelwa ngasikhathi sinye eqenjini ngalinye lesampula
Thumela kwabanye ngemiphumela yokuwina
I-Interspire Automates Email A / B Ukuhlolwa
Isici esihlakaniphile sokuhlolwa kokuhlukaniswa kwe-imeyili kwe-Interspire ukuthi isoftware yabo izothumela uhlu lwakho oluphelele nge-imeyili ngokuya ngemiphumela yokuhlolwa kwakho kwe-A / B!
Kanye nokuhlolwa kwe-Split kanye ne-Automation, i ukukhishwa kwakamuva kwesoftware yabo ye-imeyili Marketing ungeze izici ezilandelayo:
Izihlungi - Dala ama-imeyili wokuzalwa avela kaningi, susa / susa oxhumana nabo uye / kusuka kuhlu oluningi ngokususelwa kokuthi ngabe bavule i-imeyili yakho noma bacofa isixhumanisi esithile nokunye okuningi.
Ukungena kwemicimbi - Izandla ungene imicimbi efana izingcingo kanye nemihlangano. Ukungena ngemvume komcimbi okuzenzakalelayo kudala umcimbi woxhumana naye lapho bethola i-imeyili / ophendula ngokuzenzakalela, bevula i-imeyili noma chofoza isixhumanisi ukuze wena noma iqembu lakho nikwazi ukubonakala ngokugcwele ezenzweni zabo ngaso sonke isikhathi, kukwenza umthengisi onolwazi.
Ilogi yomsebenzi wakamuva - Izinto zakho ezisanda kufinyelelwa (oxhumana nabo, izinhlu, imikhankaso, njll) zihlala zitholakala ngaphezulu kwesikrini okwenza kube lula ukubuyela lapho ugcine khona.
Ukuqoqwa kohlu loxhumana nabo - Sebenzisa amafolda bese uhudula bese uphonsa ukuze uhlele futhi uhlele uhlu lwakho lokuxhumana ngamaqembu alawulekayo. Ilungele abathengisi be-imeyili abanenqwaba noma amakhulu ezinhlu.
Izifanekiso ezingama-20 ezintsha ze-imeyili ezakhelwe ngaphakathi - Kunemiklamo emisha nemiklamo ehambelana nokubukeka nokuzizwa kwesitolo sakho esiku-inthanethi se-Interspire Shopping Cart. Manje imikhankaso yakho yesitolo neye-imeyili ingabelana ngomkhiqizo ofanayo ohambisanayo.
Uma ubheka ukuhlanganisa isisombululo sokumaketha se-imeyili kuhlelo lwakho lokusebenza, Umaki we-imeyili we-Interspire futhi inamandla kakhulu REST-based API. Imibhalo yabo ifaka ithani lekhodi yesampula ye-PHP futhi!
Ukwehla komnotho kuyindlela edingekayo yokukhangisa